Mashruucii ugu weynaa ee Hay'adaha Turkiga oo Maantay laga furay Muqdisho // Daawo | KEYDMEDIA ONLINE
Mashruucii ugu weynaa ee Hay’adaha Turkiga oo Maantay laga furay Muqdisho // Daawo
Muqdisho (KON) - Waxaa Maanta xarigga laga jaray Dugsi Iskuulo Cusub ay Muqdisho ka hirgeliyeen Hay’ad Turkish ah iyo Zamzam Foundation oo ay hooy u noqonaya Arday agoon ah, waxna ay ku baranayaan.
Madaxweynaha dawladda federalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wafdiga Hay'adaas ayaa Maanta xarigga ka jareen dhismahaan Cusub.
Dugsiga ayaa Hooy u noqon doono Agoon gaareysa 400, halka 1500 oo ardayna ay wax ku baran doonaan.
Hay'addaha IHH Turkey iyo Zamzam Foundation ayaa Sanad kahor waxey bilaabeen iney Muqdisho ka dhisaan Xaruntaan.
Cumar Jaamac Aadan oo ah Madaxa mashaariicda ee hay'adda Zamzam ayaa sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu weynaa ee ay labadan Hay'adooda ka hirgeliyaan Soomaaliya. Isagoo intaas ku daray in hay'aduhu ay mashaariic kale oo horumarineed kawadaan Dalka.
Mashruucan oo ay dhaqaalihiisa bixinayso hay'adda Turkiga ee IHH ayna fulinayso hay'adda Zamzam Foundation ayaa wuxuu ka kooban yahay dhisme iskuul oo 24-qol ah, hoyga wiilasha iyo midka gabdhaha, masjid, xarun caafimaad, ceel-biyood iyo garoon lagu ciyaaro.
Dhulka ay xaruntan ku fadhido ayaa wuxuu cabirkiisu gaarayaa 100 x 100 ama 10,000 mitir oo laba jibaaran, iyadoo saraakiisha Turkiga ee maanta booqday xaruntaas ay aad ugu riyaaqeen sida ay howshu ku socoto.
Madaxweynaha ayaa u mahadceliyay Dowladda Turkiga iyo Hay'adahaan, Shaqada weyn ay ka wadaan Dalka.